ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် – ကလေးတွေ မှာ ဘာ့ကြောင့် အဖြစ်နည်းတာလဲ? – Let Pan Daily
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် – ကလေးတွေ မှာ ဘာ့ကြောင့် အဖြစ်နည်းတာလဲ?
Let Pan | May 20, 2020 | Local News | No Comments
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ မှာ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တစ်ဦး မွေးပြီးပြီးချင်း နာရီ ၃၀ အကြာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံထားရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းက ကမ္ဘာကို ပျံ့သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ လောလောဆယ် လူ ၉၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး လူ ၄ သောင်းကျော် ရောဂါ ကူးစက်ခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဖြစ်ပွားမှုမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အဓိက ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံ ၃၀ ကျော်မှာလည်း ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသူတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကလေးငယ်တွေထဲမှာတော့ ရောဂါ ကူးစက်ခံရတာ သိပ်ကို နည်းပါးတာ တွေ့ရပါတယ်။
အမေရိကန် ဆေးပညာအဖွဲ့ရဲ့ ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပွားမှုအကြောင်း အခုနောက်ဆုံး လေ့လာချက်အသစ်ထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဝူဟန်မြို့က ဂျင်ယင်တန်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသခံနေသူ လူနာတွေကို စမ်းသပ်လေ့လာထားချက်တွေ ကို ညွှန်းဆိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရသူ အားလုံး ရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ဟာ အသက် ၄၀ နဲ့ ၅၉ နှစ်အကြား အရွယ်တွေ ဖြစ်ပြီး လူနာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ အသက် ၃၉ နှစ်အောက် အရွယ်တွေ ဖြစ်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေမှာ ရောဂါ ကူးစက်တာကတော့ အတော်လေး ရှားတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် ဒီလို ဖြစ်ရတာပါလဲ။
ကလေးတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက် မှုနည်းပါး
ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်သူ သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။
“ကလေးတွေ ရောဂါကူးစက်ခံရမှုကနေ ရှောင်ရှားနိုင်တာ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မဖြစ်ကြတာဟာ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲ ဆိုတာ အတိအကျ မသိရဘူး” လို့ ရယ်ဒင်း တက္ကသိုလ်က ရောဂါပိုးမွှားဗေဒ ပါမောက္ခ အီယန်ဂျုန်းစ် က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒါဟာ ကလေးတွေအနေနဲ့ ဒီရောဂါပိုး အပျော့စားမျိုး ကူးစက် ခံရတာ ဖြစ်နိုင်ပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အဆင့်အထိ မရောက်ခဲ့ဘဲ ဆရာဝန်တွေဆီ သွားပြရလောက်အောင်၊ ဆေးရုံတက်ရလောက်အောင် အထိ မဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လို့ ယူဆရပါတယ်။
လန်ဒန်ကောလိပ် တက္ကသိုလ်က ဆေးပညာဆိုင်ရာကထိက နက်သာလီ မက်ဒါမော့က ဒီအချက်ကို လက်ခံပါတယ်။
“အသက် ၅ နှစ် အထက် ကလေးတွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ရှိကြပါတယ်၊ သူတို့ ရောဂါကူးစက်ခံရကောင်း ခံရရင်တောင် သိပ်မပြင်းတဲ့ ရောဂါအမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ လက္ခဏာ မပြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်”လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ ဒီလို ရောဂါကူးစက်ခံရမှုနည်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု အရင်က ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံမှာပဲ စခဲ့တဲ့ ဆားစ်လိုမျိုး ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၈၀၀ လောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း ကလေးငယ်တွေ ရောဂါ ကူးစက်ခံရမှု သိသိသာသာ နည်းခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ကလေးသူငယ်တွေမှာ ဆားစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ၁၃၅ ခု ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကို အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန (CDC) က ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဖော်ထုတ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေဆုံးမှု တစ်ခုမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ကျောင်းပိတ်ရက်ကြောင့် ကလေးတွေ ခံသာသွားခဲ့တာလား
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်ဟာ ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားချိန် ဖြစ်တာမို့ ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေလောက် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ သိပ်မထိတွေ့ရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မက်ဒါမော့က ယူဆပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်နယ် အားလုံးနီးပါးလောက်မှာ စာသင်ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး တချို့ကျောင်းတွေဆို ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်လလုံး ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်တစ်အိမ်မှာ တစ်ယောက်ယောက် ရောဂါ ဖြစ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ လူကြီးတွေက အဲဒီလူနာကို ပြုစု စောင့်ရှောက်လေ့ရှိပြီး ကလေးတွေကို တခြားတစ်နေရာ ပို့ထားလေ့ ရှိတတ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ရောဂါပိုးနောက်ထပ် ပြန့်ပွားပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရောဂါပိုးနဲ့ ထိတွေ့ရမယ့် အန္တရာယ် ပိုများလာရင်တော့ အခြေအနေ ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တစ်ဟုန်ထိုး ပြန့်ပွားလာနေတဲ့ လောလောဆယ် အချိန် မှာတော့ ကလေးသူငယ်တွေမှာ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းကတော့ နည်းနေဆဲပါ။
ဆားစ် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတုန်းကလည်း အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ဆေးရုံတက် ဆေးကုသခံရမှုက နည်းပါးခဲ့တယ်ဆိုတာကို CDC လေ့လာသူတွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ကလေးတွေထက် လူကြီးတွေအပေါ် ပိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက် သလား။
ကလေး အနည်းအပါးမှာသာ ရောဂါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ အတည်ပြုထားပေမဲ့လည်း ဒါဟာ ကလေးတွေဆီ ရောဂါမရောက်ခဲ့တာကြောင့် မဟုတ်ဘူးလို့ ဆေးပညာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ပိုဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတာက ကလေးတွေထက် လူကြီးတွေမှာ ပိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်လေ့ ရှိတဲ့ ရေကျောက်လို ရောဂါ အမျိုးအစား အတော်များများမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါလည်း ပါဝင်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေက ဒီလို ရောဂါမျိုးတွေလိုပဲ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကို ခံနိုင်ရည် ရှိတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကားဒစ်ဖ် တက္ကသိုလ်က ကူးစက်ရောဂါ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အင်ဒရူး ဖရီးဒ်မန် က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရောဂါလက္ခဏာ မပြတဲ့ ကလေးတွေ၊ ရောဂါ အခြေအနေ သိပ်မပြင်းတဲ့ ကလေးတွေကို အာဏာပိုင်တွေက မစမ်းသပ်တဲ့အတွက် ကလေးတွေမှာ ဒီရောဂါ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ပြောတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် နဲ့ အင်ပီးရီးယဲလ် ကောလိပ် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်က ကပ်ရောဂါဆိုးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ခရစ္စတဲလ် ဒေါ်နယ်လီ ကလည်း “ဟောင်ကောင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆားစ်ရောဂါ အထောက်အထားတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီတုန်းက ကလေးငယ်တွေမှာ ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်မှု နည်းတဲ့အတွက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မရှိတာ ဖြစ်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ကောက်ချက်ချခဲ့ကြကြောင်း” ပြောပါတယ်။
အရင် ရောဂါအခံ ရှိနေမှု
ဥပမာ ဆီးချို၊ နှလုံး စတဲ့ ရောဂါမျိုးတွေ အရင် ကတည်းက ရှိထားနှင့်ပြီးသား လူကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခံအား စနစ်မှာ အားနည်းချို့ယွင်း နေတာကြောင့် ဒီလို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျိုးကို ခံနိုင်ရည် ပိုနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
“ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေပြီးသား ဒါမှမဟုတ် သက်ဆိုး မရှည်တော့မယ့် သူတွေဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါရဲ့ ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဆုတ်အအေးမိ ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်” လို့ အီယန် ဂျုန်းစ်က ရှင်းပြပါတယ်။
“ဒါဟာ တုတ်ကွေးနဲ့ တခြား အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါတွေနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဂျင်ယင်တန် ဆေးရုံမှာ စမ်းသပ်လေ့လာခဲ့တဲ့ လူနာ တစ်ဝက်လောက်ဟာ နဂို နာတာရှည် ရောဂါ ရှိထားပြီးသား လူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဖြန့်ဖြူးတတ်ကြသူတွေလို့ သိထားကြတယ် မဟုတ်ပါလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ ကလေးတွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ပိုး ကူးလွယ်သူတွေ၊ ပြန်ဖြန့်တတ်သူတွေ ဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး လျှောက်ဖြန့်တတ်တဲ့ မဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေ လို့တောင် သတ်မှတ်ခံရတတ်တယ်လို့ အီယန် ဂျုန်းစ်က ပြောပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကို အလွယ်တကူ ဖြန့် တတ်တယ် ဆိုတာကို ကလေးထိန်းကျောင်းမှာ နေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မိဘတိုင်း သိကြမှာပါ လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒီတော့ ရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လူနာစာရင်းမှာ ကလေးအတော်များများ တွေ့ရမယ်၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသစ်နဲ့ဆို သေတဲ့ ကလေးတွေတောင် ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တွန်းလှန်ဖို့ ကလေးမှာ ပိုအားကောင်း တဲ့ ကိုယ်ခံအား စနစ် ရှိနေလို့ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ ရောဂါပိုးကိုယ်တိုင်ကိုက လူကြီးတွေထက်စာရင် ကလေးတွေမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့အရှိန် အားနည်းလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေး ကုသခံဖို့ မလိုဘဲ စမ်းသပ်မှုခံရတာမျိုး လူနာစာရင်းထဲ ထည့်သွင်း ခံရတာမျိုး မရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုကို နားလည်သဘောပေါက် လာအောင် ပိုမိုဆောင်ရွက်နေပြီမို့ ပိုရှင်းလင်း ပြတ်သားတဲ့ အဖြေတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ကျောင်းတွေကို ပိတ်ထား တာမျိုး၊ မိဘတွေက အကာ အကွယ်ပေး ပြုစု စောင့်ရှောက်တာမျိုး လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်မခံရအောင် ကလေးတွေကို ထိထိရောက် သီးသန့်ခွဲထားဖို့လည်း လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံ တဝန်းလုံးမှာ ကလေးငယ်တွေ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တဲ့ အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ ကျရင်တော့ ကလေးတွေမှာ ဒီဗိုင်း ရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မှု ဘာ့ကြောင့် နည်းသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပိုမို သိလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မုံရွာ မှာ ဖမ်းမိ ခဲ့တဲ့ မိကျောင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း (လွတ်နေတဲ့ မိကျောင်းတွေကို လိုက်ဖမ်းလျက်ရှိ)
အောငျလ ရှုံးလို့ငိုနတေဲ့ကလေး အတှကျ ဂုဏျပွုလကျဆောငျ စကားပါးလိုကျ တဲ့ အောငျလအနျဆိုငျး
စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ သက်သာဖို့အတွက် Q ဝင်ရင်း တက်နိုင်သလောက် ကူညီပေးနေကြတဲ့ ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းလေး